Paul Pogba oo diiddan dal ku galka (Visa) safarka ay kooxdu ku aadayso Waddanka Shiinaha, xilli uu sheegay in macallin Ole uu… – Gool FM
(Manchester) 27 Abriil 2019. Sida wararku ay sheegayaan Paul Pogba ayaa iska diiday dal ku gal (Visa) safka ay kooxda Manchester United ku aadayso Waddanka Shiinaha.
Jariiradda The Sun ayaa warinaysa in xiddiga Manchester United ee Paul Pogba uu diidan yahay dal ku galka (Visa) safka ay kooxdu ku aadayso dalka Shiinaha, halkaasoo ay ku soo ciyaari doonto kulamada isdiyaarinta xilli ciyaareedka cusub.
Sababaha uu Paul Pogba u diidan yahay inuu qaato dal ku galka Shiinaha oo uu kooxda la safro ayaa waxa ay caddeyn u tahay inuu doonayo inuu kooxda ka tago dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Warar la isla dhexmarayo ayaa waxa sheegayaan in laacibka reer France ee Paul Pogba uu ku sii jeedo kooxda Real Madrid ee ka dhisan caasimadda Spain, taasoo kol hore uu ku tilmaamay in u ciyaaristeedu ay tahay riyo, isla markaana uu xiddigan khadka dhexe qarka u saaran yahay inuu ku biiro Los Blancos.
Waxa ay Jariiradda The Sun warbixinteeda intaa ku dartay in xaaladdan Pogba ay dhibaato iyo jaha-wareer ka dhex abuureyso qolka labiska ee kooxda Manchester United.
Sidoo kale waxaa warbixinta lagu sheegay in laacibkan khadka dhexe uusan rumeysnayn in Tababare Ole Gunnar Solskjaer uu yahay macallinka ku habboon ee kooxda horay u dhaqaajin lahaa, sidaas awgeedna uu doonayo Pogba inuu banaanka aado.